Huawei C8650 နှင့် C8800 (Android version v2.3.3) ကို Root လုပ်နည်း – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Mobile ဖုန်းသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာဈေးကွက်အရောင်းအ၀ယ်ကျဆင်းနေ Optimize Master v1.3 for Android AVP: Evolution v1.3.2 APK+OBB(238Mb) CDMA 800 Mhz SIM Card များနှစ်လအတွင်းချပေးပြီးလျှင် GSM,WCDMA နှင့် CDMA SIM Card များတစ်ပြိုင်နက်ချပေးမည်။ Furby v1.0.8 for iPhone/Pad/Pod touch Home
Published On: Thu, Sep 8th, 2011 Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး Huawei C8650 နှင့် C8800 (Android version v2.3.3) ကို Root လုပ်နည်း
facebook မှာတွေ့လို့ မူရင်း post အတိုင်း ပြန်share ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့အောက်က ဖိုင်နှစ်ခုကို download လုပ်ပါ။
၃. နံ​ပါ​တ်(၂) မှာ​download လုပ်ထား​တဲ့​file ကို update.zip လို့​ အမ​ည်ြေ​ပာ​င်းြ​ပီး sdcard ထဲ​ကို copy ကူးထည့်​လိုက်ပါ။
၄. နံ​ပါ​တ်(၁) မှာ download လုပ်ထားတဲ့ file ကို extract လု​ပ်ြ​ပီး 双击..Recovery ဆို​တာ​ကို Run ပါ။ အစိ​မ်းေ​ရာ​င် စာ​တ​မ်းေ​လးေ​တွ ရှိ​လိ​မ့်​မ​ယ်။
၄. ဖု​န်း​မှာ Vol Down + Power ကို5to 10 စ​က္က​န့်ြ​ကာေ​အာ​င် နှိပ်ပါ (မ​လွှတ်ပါ​နဲ့​)။Huawei ဆို​တဲ့ လို​ဂို​မှာ ရ​ပ်ေ​န​မ​ယ်။ ဒါ​ဆို Fast Mode ဝင်ပါြ​ပီ။
၆. ဖု​န်း​ကို​ကွန်ပျူ​တာ​နဲ့​ချိတ်ပါ။ တ​ခါ​မှ မချိတ်ဖူး​ရ​င်ေ​တာ့ Driver installation processေ​တွ လုပ်ပါ​လိ​မ့်​မ​ယ်။ အစိ​မ်းေ​ရာ​င် စာသားေ​တွ ဟို​လု​ပ် ဒီ​လု​ပ်..ြ​ပီး​လို့​ အတ​န်ြ​ကာေ​အာ​င်ြ​ငိမ်သွားြ​ပီ​ဆို​ရ​င် Recoveryေ​အာ​င်ြ​မင်ပါြ​ပီ။
၇. Recovery အလိုလို တက်လာ​လိ​မ့်​မ​ယ်။ မ​တက်လာ​ရ​င်ေ​တာ့ Vol Up + Power နဲ့​​ဝင်ပါ။
၈. -apply update from sdcard >> -Yes >> – Insatll /sdcard/update.zip ကို အဆ​င့်​ဆ​င့်ေ​ရွး​ပါ။
၉. စက်ကို Restart ချြ​ပီးြ​ပန်တက်လာ​တာ​နဲ့​ Applicationsေ​တွ​ထဲ​မှာ Super User ဆို​တာေ​တွ့​​ရ​လိ​မ့်​မ​ယ်။
၁၀. Done! Root လုပ်လို့​ပြီးပါပြီ။
မူရင်းလင့်မှာဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Huawei U8815(G300) root လုပ်နည်း (baseband 2030 root)
The Myanmar’s Android – PDF Ebook [Bo Sunny Lwin]
4 comments on “Huawei C8650 နှင့် C8800 (Android version v2.3.3) ကို Root လုပ်နည်း”	nge on November 10, 2012 at 3:44 pm said:
ကျေးဇူးပြုပြီး…U-8800 root နည်းလေးကိုလည်း ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်…အစ်ကို
Reply ↓	Patrick on April 7, 2013 at 6:26 am said:
this Download link is now dying.please give meanew one download link.thanks….
no(1) Download link is now dying.Please give meanew download link.thanks……
Reply ↓	HtunThet on April 9, 2013 at 7:12 am said:
moe tun on Samsung Galaxy Official FirmwaresMG Aung Thu KO on Go locker(မြန်မာမှု) လွယ်ကူစွာဆန်းသစ်ထားပါတယ်myomin on Samsung Galaxy Grand (GT-I9082) အား မ Root ပဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းNeleta on ဖုန်းဈေးနှုန်းများ ( Mobile Price)tay zar on ဖုန်းဈေးနှုန်းများ ( Mobile Price) Android Development